Kọfị kọwaara ọha mmadụ | Martech Zone
Satọde, Febụwarị 23, 2013 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Kọfị bụ otu n'ime ihe ụtọ na-enweghị atụ dị na ndụ m nke m na-enweghị ike ime n'enweghị. Ana m a siụ ọ onụ onụ n'ọchịchịrị French nke a roara n'ọkụ ugbu a na ọmarịcha ya, mebere m na stovetop espresso maker. Ezigbo ndị enyi m nwere ụlọ ahịa kọfị. Onweghị ihe m hụrụ n’anya karịa ịchọpụta ụlọ kọfị anaghị agbụ m mgbe m nọ n’ụzọ. Ọtụtụ mgbe m na-ezute mmadụ, ọ bụ n’ụlọ ahịa kọfị. Kọfị agafewo ihe na-akpali akpali ma ọ bụ ugbu a ihe ọ drinkụ drinkụ metụtara ọtụtụ ihe ncheta m.
Ihe omuma ihe ndi a di n’okpuru bu site na Market Maven ma sitere n’ike uche Social Media na Donuts site na mgbasa ozi atọ dị na Raleigh.
Tags: kọfịn'ọma ahịa mavenelekọta mmadụ mediaelekọta mmadụ media na kọfịelekọta mmadụ media na donutsatọ na mgbasa ozi
Feb 25, 2013 n’elekere 6:14 nke abali
Ebe ọ bụ na m bụ onye na-a coffeeụ kọfị oge niile na enweghị m ike ịrụ ọrụ otu ụbọchị na-enweghị ma ọ dịkarịa ala otu iko kọfị, achọpụtara m na "infographic" a na-egbuke egbuke n'ezie. Eziokwu dị nnọọ na ya. Daalụ maka ịkekọrịta nke a na anyị Douglas.
Feb 25, 2013 n’elekere 9:45 nke abali
Echere m otu ihe ahụ!
Abụ m onye na-a aụ tii n'onwe m mana nke ahụ bụ nnukwu infograph Douglas. Enwere m ike ibipụta nke ahụ ma kesaa ya na nne m oge ọzọ m gara - ma eleghị anya ugbu a ọ ga-enweta ihe m na-eme LOL Oh na m masịrị Google+ nkọwa Google+